Nagarik Shukrabar - को हौ तिमी ?
शुक्रबार, ०२ फागुन २०७६, १२ : ४५ | नीरा शर्मा
तिमी के हौ ?
के हौ तिमी ?
तिमीलाई पहिलोचोटि देख्दा लाग्यो–
मेरा हाराएका घामजून भेटेँ
त्यो पनि तिमीमै भेटेजस्तो लाग्यो
मेरो आफ्नो फैलावट हो !
म रुँदा पनि
हाँस्दा पनि गुञ्जिरहने
यो त मेरो हृदयको आवाज हो
त्यसरी एकएक गर्दै
मेरो सबैथोक हराएपछि
हराएको थियो मेरो खुसी पनि
अब म के भनौँ ?
कतै तिमी मेरो अमूल्य सम्पतिको थुप्रो त हैनौ ?
कि मेरो सानो देशको
सानो झुप्रो हौ तिमी ?
भन न भन...